Maalin: Janaayo 8, 2018
ARUS - Wasaaradda Dhaqaalaha 17.UR-Ge 046 Istaraatiijiyada Istaraatiijiyada Miisaaniyadda Istaraatiijiyada ayaa la qabtay
Cluster ee Nidaamka Gaadiidka Raadinta ee Anadrol oo aan fulino iyada oo la raacayo War-murtiyeedka Ku Saabsan Taageeridda Horumarinta Tartanka Caalamiga ah. UR-D. Inta ay ku dhexjirto baaxadda Falalka Falanqaynta Baahiyaha ee mashruuceena 2010 codeed, Ostim OSB [More ...]
Sawir sawir ah oo lagu magacaabo Sahip Adopt Jerusalem T ayaa laga furay Tünel
Magaalada Jerusalem, oo ah meesha ugu horeysa ee Qibla Islaamku, IETT waxay furtay bandhig sawir ah oo cinwaankiisu yahay 'Israil Is ogow oo ku yaal magaalada Jerusalem ee Tunel si loo soo jiito dareenka arxan darrada iyo riwaayadaha ay Israa’iil siisay Falastiin. Sidoo kale waa qayb ka mid ah juqraafi ahaan Islaamka. [More ...]
Samsun Metropolitan, waxay ku dhameysatey darawalka darawalka
Drivers Turkey iyo Vehicle Federation (TŞOF) Madaxweynaha Fawzi Apaydin, Samsun degmada Metropolitan ayaa sheegay in dhaawaca in Samsun ee baska, kuwaas oo laga soo iibsaday, "bay hawshaas ku dhammaynayaan Xirfado darawalka," ayuu sheegay in Samsun Metropolitan la soo dhaafay muddo ah Council ee gaadiidka [More ...]
Wasaaradda Horumarinta Gaadiidka Baaskiilka
Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Dabiiciga ah ayaa qaadaya tallaabo lagu dhimayo isticmaalka gawaarida iyo keydinta tamarta. Ilaa 2023, wadooyinka baaskiil wadooyinka ayaa laga dhisi doonaa xarumaha magaalada. Wadooyinkan ayaa ah [More ...]
Kooxda IZBAN'da ee ku nool xadka ilaalada gaarka ah ee 500'un waxay rabaan inay furaan albaabka hore ee shaqaalaha IZBAN. 500, oo ka shaqeysa İZBAN sababtuna tahay qaab dhismeedka saamigiisa, waxay leedahay sumcadda shaqaalaha amniga khaaska ah dushiisa. Cabasho ku saabsan macluumaad la'aanta maamulada [More ...]
Diyaaradda Turkiga ee ugu horreysa waxay timid Kepez
Duqa Magaalada Kepez Hakan Tütüncü ayaa diyaaradda u keenaya Dokuma kadib markabka tareenka. Dawlada Hoose ee Kepez, oo soo saarta naqshad la mid ah tii 'Kacaanka' oo ay naqshadeeyeen oo ay soo saareen injineerada Turkiga, ayaa hadda ah diyaaraddii ugu horreysay ee Turkish 'Vecihi'. [More ...]
Dheriga Guriga Bilaashka ah ee ASTTI
Tan iyo maalintii ugu horreeysay ee uu xafiiska qabtay, Duqa Magaalada Ankara ee Caasimadda Assoc. Dr. Akhbaar kale oo wanaagsan ayaa ka socota Mustafa Tuna. 25 daqiiqad daqiiqad oo gawaarida la dhigto ee AŞTİ [More ...]
Manisa waxaa aasaasay MANULAŞ, oo ah shirkad hoos timaada Dawlada Hoose ee Manisa, waxayna awood u siisay adeegsiga adeegyo badan oo Dawlada Hoose ee Manisa Metropolitan degmada marka lagu daro gaadiidka dadweynaha. Wadajirka Dawladda Hoose ee Manisa [More ...]
Shaqaalaha ka shaqeeya Muqdisho
Hadalada mugdiga leh ee ku xusan Xeerka shaqo qorista ee shaqaale hoosaadyada hoos u dhaca waxay keenaan jahwareer daran. Sharciga Xeerarka (Xeerku) wuxuu dhigayaa in shaqaalaha ku shaqeeya soo iibsiga adeegga ee aan ku salaysnayn shaqaale qorista shaqaalaha lama qori doono, 7 / 24 [More ...]
Madaxwayne Steel I 2017 wuxuu noqday sanadka maalgashiga iyo adeegga Madaxweynaha
Gudoomiyaha Celik, Ururada Dhaqamada Tabaruca oo kulan la yeeshay wakiilo ka socda 2017'de ayaa sharaxay maalgashiga. Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Mustafa Celik, wuxuu la kulmay madaxda iyo maamulayaasha Ururada Dhaqanka ee Tabaruca. 2017 kulanka [More ...]
Wadayaasha gaadiidka dadweynaha oo wacyigelinaya kor u qaadidda Kocaeli
Tababarrada la siinayo gaadiidka dadweynaha, tagaasida iyo darawalada adeegga ee Kocaeli oo ay bixiso Dawladda Hoose ee Magaalada, Waaxda Gaadiidka Dadweynaha, Qeybta Tababarka ayaa sii socota. Dab-daminta iyo tababbarka gargaarka koowaad [More ...]
RayHaber 08.01.2018 Warbixinta Shirka
Daryeelka Gawaarida Gawaarida Cagaaran
Köseoğlu, mashruuca tareenka ayaa laga yaabaa inuu ku bilowdo rubuc-billaha koowaad ee ku-xigeenka 2018 Ayşe Sula Köseoğlu oo sharraxaya hannaanka mashaariicda mega ee loo qorsheeyay Trabzon 2017 sanadka waa sanadka abuur abuurka 2018 wuxuu noqon doonaa sannadka ururinta miro [More ...]